China iqaqanjiswa sentsimbi kwalenza sheet ukwenza kunye Factory | Ukutsala
Isicelo: Izinto ezichanekileyo zomatshini
Olu hlobo lweemveliso lwenziwa kusetyenziswa indlela yokudipha eshushu, kodwa emva kokuba iphumile etankini, iya kufudunyezwa kwangoko ukuya kuma-500 ℃ ukwenza iifilimu ezincinci zezinki kunye nentsimbi. Eli phepha kwalenza ubungqingqwa elungileyo ukutyabeka kunye weldability.
Umgca wemveliso kwalenza kusetyenziswa inkqubo yemveliso yentsimbi kakhulu eUnited States, iinkcukacha eziphambili imveliso yi 0.15-1.5mm * 800 ~ 1250mm. Umgca wemveliso uxhotyiswe ngemitha yesithando somlilo esiqhubekayo; Ukufudumeza uhlobo lwetyhubhu yejet ethe tyaba yokungenisa ubushushu zekeramic imbiza; ezine imela umoya kwisisu; umatshini okhanyayo Umatshini wokulungisa kunye nezinye izixhobo eziphambili, sibe ngoovulindlela ngetekhnoloji enelungelo elilodwa lomenzi: inkunkuma yokusebenzisa isixhobo sobushushu, eya kuthi isindise amandla amaninzi kwaye ikhusele okusingqongileyo.
Umaleko we-zinc kunye ne-alloy yentsimbi yenziwa kuyo yonke le nto ngokunyanga ngobushushu kwentsimbi edlulisa ulwelo lokuhlamba. Ukutyabeka kujongeka kungwevu ngaphandle kobukhazikhazi besinyithi. Kulula ukuba ngumgubo ngexesha lenkqubo yokubumba enobundlobongela. Iyasebenza kwisambatho esinokupeyintwa ngaphandle konyango ngaphandle kokucoca ngokubanzi.
Amanqanaba esinyithi se-alloy yentsimbi amelwe ngamanani ama-Arabhu kunye neesimboli zemigangatho yemichiza. Amanani amabini ama-Arabhu asetyenziselwa ukumela umxholo wekhabhoni (x / 10000) kunye nendawo kwindawo yentloko. Inkqubo ye-
Umxholo wezinto ezichazayo uboniswa ngolu hlobo lulandelayo: Xa umxholo ophakathi ungaphantsi kwe-1.50%, inani lebakala libonisa kuphela into leyo kwaye ngokubanzi alibonisi umxholo; Xa umxholo ophakathi uyi-1.50% ～ 2.49%, 2.50% ～ 3.49%, 3.50% ～ 4.49%, 4.50% ～ 5.49%, 2, 3, 4 no-5 zibhaliwe ngokulandela imiba yokuvumba. Umzekelo: Umxholo ophakathi wekhabhon, i-chromium, i-manganese kunye ne-silicon yesinyithi se-alloy yentsimbi yi-0.30%, 0.95%, 0.85% kunye ne-1.05%. Xa umxholo we-S kunye no-P uyi -0.035%, inqanaba libonisa "30CrMnSi". Umgangatho ophezulu wenqanaba lesakhiwo se-alloy yentsimbi (S kunye nomxholo P P0.025%) kuboniswa ngokudibanisa "A" kwibakala. Umzekelo: "30CrMnSiA". Umgangatho ophezulu wesakhiwo se-alloy yentsimbi (S≤0.015%, P≤0.025%) iboniswa ngokudibanisa "E" kwibakala. Umzekelo: "30CrM nSiE". Inqanaba lesinyithi se-alloy yentsimbi iya kongeza isimboli ebonisa injongo yemveliso kwiTheyibhile 1 kwintloko yebakala (okanye umsila). Umzekelo, ibakala le-30CrMnSi yentsimbi ye-riveting screw iboniswa njenge-ML30CrMnSi. 2. Indlela emeleyo yentsimbi yebakala yentsimbi yasentwasahlobo iyafana nengxubevange yentsimbi. Umzekelo: Umxholo ophakathi wekhabhoni, isilicon kunye nemanganizi yi-0.60%, 1.75% kunye ne-0.75% yentsimbi yasentwasahlobo kwaye inqanaba limelwe njenge "60Si2Mn". Kwimigangatho ephezulu yentsimbi yasentwasahlobo, isimboli "A" yongezwa kwibakala kwaye inqanaba limelwe njenge "60Si2MnA".
Egqithileyo Idiphu Hot intsimbi kwalenza ipleyiti
Okulandelayo: Iintlobo Ukwaleka-PE